I-Commodore uStephen Decatur kwiMfazwe ka-1812
Imfazwe ka-1812: I-Commodore uStephen Decatur
Wazalelwa eSinepuxent, MD, ngoJanuwari 5, 1779, uStephen Decatur wayengunyana kaKaputeni Stephen Decatur, uSr kunye nomkakhe uAne. Igosa leenqwelo zamanzi ngexesha leMelika yokuVukisa , uDecatur, uSr. Wayenendodana yakhe efundiswe kwi-Episcopal Academy eFiladelphia. UDecatur omncinane wathola uthando olwandle njengomncinci xa ehamba noyise kwindlela yokurhweba enethemba lokuba kunokunceda ukuphilisa imeko yokukhwehlela.
Ukubuya ngokuphilileyo, waqala ukuvakalisa umnqweno wokubuyela elwandle, into eyayixhalabisa unina owayenqwenela ukuba aqhubeke nomsebenzi kubafundisi.
Ukugqweswa iziqu kwi-Episcopal Academy, u-Decatur wabhalisa kwiYunivesithi yasePennsylvania ngo-1795 kwaye wayengumfundi waseklasini wamagosa emikhosi ezayo uCharles Stewart noRichard Somers. Enyuka kakhulu kwaye engonwabanga ubomi baseyunivesithi, wakhetha ukuhamba esikolweni eneminyaka eyi-17. Ngoxhaswa nguyise, u-Decatur oqeshwe ngumbutho wokwakha iinqanawa zikaGurney noSmith waza wancedisa ekufumaneni imithi nge-keel ye-fries USS United States (44 izibhamu)
Enqwenela ukulandela uyise kwiinkonzo zamanxweme, uDecatur wafumana uncedo lukaCommodore uJohn Barry ekufumaneni i-warrant's warrant. Ukungena kwinkonzo ngo-Ephreli 30, ngo-1798, u-Decatur wabelwa eMelika kunye noBarry njengegosa lakhe elilawulayo. Ukukhuthaza imfundo yengane yakhe, umdala uDaratur uqeshe uTalbot Hamilton, owayengumphathi weRoyal Navy, ukufundisa uStephen kwiindawo zokuhamba kunye neendawo ezinxulumene nazo.
I-Decatur yahamba nge-friji ngexesha le- Quasi-War kwaye yabona isenzo kwiiCaribbean njengoko iUnited States yathumba amaFrench ahlukeneyo. Ukubonisa ubuchule bakhe njengomkhumbi kunye nomkhokeli onelungelo, uDecatur wathola ukunyuswa ku-lieutenant ngo-1799. Xa ama- United States ayefuna ukulungiswa ngowe-1800, wathunyelwa kwi-brig USS Norfolk (18).
Uhambo oluya kwiiCaribbean, iDecatur yenza inxaxheba kwizinto ezininzi ngaphambi kokuba ubuyele e- United States kamva ngaloo nyaka. Ekupheleni kobambiswano ngoSeptemba 1800, i-US Navy yayincitshiswa yiCongress kunye namagosa amaninzi akhutshwa kwinkonzo.
Imfazwe yaseBarbary yokuqala
Elinye lamathenti angamashumi amathathu anesithandathu agcinwa yi-US Navy, u-Decatur wabelwa kwi-frigate USS Essex (32) njengo-lieutenant wokuqala ngo-1801. Ingxenye yeqela likaCommodore uRichard Dale, u- Essex waya eMeditera ukuba ahlangabezane nalawo maBhabarb ayewaxela kwi-American shipping. Emva kwentsuku elandelayo e-USS eNew York (36) njengo-lieutenant wokuqala, u-Decatur wabuyela e-United States waza wathatha umyalelo we-brigs entsha USS Argus (20). Ukuhamba ngaphesheya kwe-Atlantic ukuya eGibraltar, wabuya umkhumbi waya eLieutenant Isaac Hull waza wanikwa umyalelo we-USS Enterprise (12).
NgoDisemba 23, 1803, i- Enterprise kunye nomgaqo- siseko we- USS (44) wathatha i- ketolitan ketch iMastico emva kokulwa okubukhali. Ukuqhayisa ngokuqhaqhaqhayisa , i-ketch yanikwa i-Decatur ukuze isetyenziswe ngokukhawuleza ukutshabalalisa i-USS Philadelphia ye -frigate (36) eyayisisigxina echwebeni laseTexpoli kwaye yafakwa ngo-Oktobha.
Ukungafuni ukuvumela iinqanawa ukuba zilungiswe kwaye ziqeshwe yi-Tripolitans, i-Commodore Edward Preble ilandele ukuba icebo lenzelwe ukuphinda lithinte kwaye litshabalalise iinqanawa.
Ngo-7: 00 ngoMsombuluko ngo-16 kuFebhuwari, ngo-1804, Uqhaqhaqhayisa , uguqulwe njengomkhumbi waseMalta kunye nemibhobho yaseBrithani, wangena echwebeni laseTripoli kunye no-Decatur. Ukuqhubela phambili umgudu, amavolontiya amaninzi aseSicilian ajoyina abasebenzi kunye nomqhubi othetha isiArabhu, uSalvador Catalano, wayeqeshwe. Ukumangalela ukuba belahlekelwe iinqanawa zabo kwisiqhwithi, eCatalano yacela imvume yokubopha eceleni kwefrigate efakwe. Njengoko iimpahla zombini zazithintela, u-Decatur wanyuka waya ePhililadelphia ngamadoda angamashumi amathandathu. Ukulwa ngamakrele kunye neepikes, bawuthatha umlawuli wale nqanawa. Nangona kwakukho ithemba elifutshane lokuba i-frigate yayingashenxiswa ngaphandle kwechweba, iPhiladelphia ayizange ifumaneke.
Njengoko Isikhukuphuku sasingenakuchukumisa umkhumbi omkhulu, amalungiselelo aqala ukutshisa. Ngomlilo oqhubekileyo endaweni, iPhiladelphia yavutha umlilo. Ukulinda ade aqiniseke ukuba umlilo ubanjwe, uDecatur wayengowokugqibela ukushiya umkhumbi ovuthayo. Ukukhusela umcimbi kwi- Inpidpid , i-Decatur kunye namadoda akhe aphumelele ngokuphumelela umlilo ukusuka ekukhuselweni kwamachweba aze afinyelele elwandle oluvulekileyo. Xa evile ukuphumelela kukaDecatur, i- Vice Admiral Lord Horatio uNelson wabiza ngokuthi "isenzo esinesibindi nesingenangqondo sonyaka."
Ngenxa yokuhlaselwa kwakhe ngempumelelo, uDecatur wanyuswa ukuba abe ngumphathi, okwenza ukuba, eneminyaka engama-25, omncinci ukuba abe nesigxina. Kwasala inkulungwane yemfazwe, wayala i-Frigates siseko kunye neCongress (38) ngaphambi kokuba abuyele ekhaya ekugqibeleni kwayo ngo-1805. Emva kweminyaka emithathu wayesebenza njengenxalenye yecala lenkundla eyazama u-Commodore James Barron ngendima yakhe kwi- Chesapeake-Leopard I-Affair . Ngo-1810, wanikwa umyalelo we- United States , ngoko ngokuqhelekileyo eWashington DC. Ukuhamba ngomzantsi ukuya eNorfolk, iDecatur yayijongene nokukhutshwa kwekhephe.
Ngethuba laseNorfolk, iCaratur yahlangana noMphathi uJohn S. Garden we-frigate entsha ye-HMS yaseMacedonia . Ngethuba le ntla nganiso phakathi kwala mabini, iDematur eyayibanjwe yiJamani ibhokhwe ye-beaver yaseMacedonia eya kunqoba iUnited States ukuba ngaba bobabili bahlangane ekulweni. Xa imfazwe neBrithani yashicilelwa kwiminyaka emibini kamva, iUnited States yaya ngeenqanawa zokujoyina iqela likaCommodore John Rodgers eNew York. Ukubeka olwandle, i-squadron yajika ulwandle olusempuma kude ku-Agasti 1812, xa ibeka eBoston.
Ukubuyela elwandle ngo-Oktobha 8, uRoggers wayekhokela iinqanawa zakhe ukukhangela imikhumbi yaseBrithani.
Kwiintsuku ezintathu emva kokuhamba eBoston, iDecatur kunye neUnited States baxhomekeke kwiqela leqela. Ukuhamba ngomkhumbi ngasempuma, iDecatur yabona i-frigate yaseBrithani ngo-Oktobha 28, malunga neekhilomitha ezili-500 ezantsi kwe-Azores. Njengoko i- United States ivaliwe ukubandakanya, iinqanawa zeentshaba zachongwa njengeMacedonia (42). Ukuvulwa komlilo ngo-9: 20 AM, uDecatur wayemkhwelise ngokutsha umchasi wakhe waza wanyusa umkhombe waseBrithani, ekugqibeleni unyanzele ukuzinikela kwakhe. Ukuthatha iMacedonia , uDecatur wafumanisa ukuba izibhamu zakhe zatshatyalalisa abantu abangama-104, ngoxa i- United States yayisifo se-12 kuphela.
UMongameli we- USS
Emva kweeveki ezimbini zokulungiswa eMacedonian , uDecatur kunye nomvuzo wakhe wenyuka eNew York, wafika ekubhiyozweni okukhulu ngoDisemba 4, 1812. Echaza iinqanawa zakhe, uDecatur wahamba olwandle ngoMeyi 24, 1813, kunye ne- United States , iMacedonian , kunye i-sloop Hornet (20). Akunakukwazi ukuphepha kwi-blockade, baphoqelelwa eNew London, CT nge-squadron eqinekileyo yaseBrithani ngoJuni 1. Banjwe echwebeni, iDecatur kunye nabasebenzi baseUnited States badluliselwa kumongameli wase- USS waseFriji (44) eNew York ekuqaleni kwawo-1814. NgoJanuwari 14, 1815, iCaratur yazama ukugqithisa i-British blockade yaseNew York.
Emva kokusebenza phantsi kunye nokulimaza ikhefu lekhefu ephuma eNew York, uDecatur wakhethwa ukuba abuyele echwebeni ukwenzela ukulungiswa. Njengoko uMongameli wabuya ekhaya, wahlaselwa yi-British frigates eHMS Endymion (47), i-HMS Majestic (56), i-HMS Pomone (46) kunye no-HMS Tenedos (38).
Ayikwazi ukuphunyuka ngenxa yeemeko ezonakalisiweyo zesikhephe, uDecatur olungele ukulwa. Kwimilingo yeeyure ezintathu, uMongameli waphumelela ekukhubaza i- Endymion kodwa wanyanzeliswa ukuba anike ezinye iifriji ezintathu emva kokuzinyameka kakhulu. Kuthathwe entolongweni, uDecatur kunye namadoda akhe bathuthwa eBermda apho bonke bafunda ukuba imfazwe yayiphelile ngo-December. UDecatur wabuyela e-US egodini leHMS Narcissus (32) kwinyanga elandelayo.
Njengomnye wamaqhawe amakhulu aseMelika, i-Decatur yanikwa umyalelo wesigqeba ngokukhawuleza ukuba inqande ama-barbary maqhinga aye asebenza kwakhona ngexesha leMfazwe ka-1812. Ehamba kwiMeditera, iinqanawa zakhe zathatha i-frigate yama -algeria yaseMashuda kwaye zanyanzelisa ngokukhawuleza U-Dey wase-Algiers ukwenza uxolo. Ukusebenzisa isitayela esifanayo "sokudibanisa izibhamu," u-Decatur wayekwazi ukunyanzelisa enye ibharbary ukuba yenze uxolo ngokwemigqaliselo efanelekileyo kwi-US.
Ngo-1816, uDecatur wayeqeshwe kwiBhodi yamaKomishinala e-Washington DC. Ukuthabatha isikhundla sakhe, wayenekhaya elenzelwe yena nomkakhe, uSusan, ngumqambi owaziwayo uBenjamin Henry Latrobe. Kwiminyaka emine kamva, u-Decatur wacela umngeni kuCommodore James Barron ngenxa yezimvo azenzileyo malunga nokuziphatha kokugqibela ngexesha le-1807 i- Chesapeake-I-Leopard Affair. Ukuhlangana ngaphandle kwesixeko kwiBladensburg Dueling Field ngo-Matshi 22, 1820, abo babini bahamba kunye noCaptain Jesse Elliott kunye noCommodore William Bainbridge njengemizuzwana yabo. Ingqungquthela yokudutshulwa, uDecatur yenzelwe ukulimaza uBarron. Njengoko abo babini baphunyelelwa, uDecatur wamlimaza kakhulu uBarron emlonyeni, nangona yena ngokwakhe wadutshulwa esiswini. Wafa kamva ngaloo mini endlwini yakhe eLafayette Square. Abangaphezu kwe-10 000 baya kumngcwabo kaCaratur kuquka uMongameli, iNkundla ePhakamileyo, kunye neninzi yeCongress.
Biography kaLydia Pinkham
I-Constance yeCastile 1354 - 1394
Biography yaseVirginia Apgar
Amandla Olawulo Abasetyhini Wonke umntu omele azi
UMary Lou Retton
Ikhonkco (Yimalini yeGama yeGalo)
I-TOEIC Yokuphulaphula: Iintetho ezimfutshane
Izifundo, iiVenzi, kunye nezinto
Ngaba iSikole seSikolo soMgqibelo kunye noMsebenzi wokuxuba?
Iimbali zamaphephandaba kwi-Intanethi
I-quarter Bowl's Starting quarterways
I-Bridge Bridge Inkcazo
Yintoni i-ADA? Izifundo ezilula kubaNinindlu